3,767 / 44,172 Strings (8 %)
Filter ↓ • Sort ↓ • All (44,172) • Untranslated (40,265) • Waiting (76) • Fuzzy (80) • Warnings (29) • Current Filter (2)
An error occurred adding you to this site. Go to the <a href="%s">homepage</a>.	 ဒီဆိုဒ်တွင့် သင့်ကို ေပါင်းထည့်ရာတွင် အမှားအယွင်း တစ်ခုြဖစ်ပွားခဲ့သည်။ <a href="%s">ပင်မ စာမျက်နှာ</a>သို့ ြပန်သွားရန်	 Details
ဒီဆိုဒ်တွင့် သင့်ကို ေပါင်းထည့်ရာတွင် အမှားအယွင်း တစ်ခုြဖစ်ပွားခဲ့သည်။ <a href="%s">ပင်မ စာမျက်နှာ</a>သို့ ြပန်သွားရန်
2011-03-23 05:05:47 GMT
An error occurred adding you to this site. Go to the <a href="%s">homepage</a>.	 ဒီဆိုဒ်တွင့် သင့်ကို ပေါင်းထည့်ရာတွင် အမှားအယွင်း တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ <a href="%s">ပင်မ စာမျက်နှာ</a>သို့ ပြန်သွားရန်	 Details
ဒီဆိုဒ်တွင့် သင့်ကို ပေါင်းထည့်ရာတွင် အမှားအယွင်း တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ <a href="%s">ပင်မ စာမျက်နှာ</a>သို့ ပြန်သွားရန်
2014-09-05 05:31:00 GMT